स्यानिटाइजर भन्दा साबुनपानी नै ‘हितकर’ « तपाईंको साझा इजलास
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर खरिद गरेको भए तत्काल फ्याँक्न सल्लाह दिन्छन्। ‘मेथानल विषाक्त हो। बच्चाबच्चीको कमलो छालामा बारम्बार घस्दा विषाक्त रसायन छालाले सोस्छ। त्यसले दीर्घकालमा दृष्टि क्षमतामा असर गर्छ। मुखमा परे ज्यानसमेत जान्छ’, डा. काफ्ले भन्छन्, ‘साबुनपानीले मिचीमिची हात धुनु जत्तिको राम्रो अरू केही होइन।’
साबुनपानीले हात धुने कुरा ओझेल परेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनको ठम्याइँ छ। ‘सफा पानी छ भने साबुनले हात धुनु सबैभन्दा राम्रो हो। साबुन र सफा पानी नभएको अवस्थामा विकल्पमा मात्र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने हो’, डा. पुन भन्छन्, ‘विज्ञापनका कारण साबुनपानीले हात धुने कार्य ओझेलमा पर्‍यो। स्यानिटाइजरको प्रयोगले महŒव पायो।’ संगठनले पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न बेलाबेलामा साबुनपानीले मिचीमिची हात धुने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ।